द्रौपदीले पाँच पाण्डवसँग यसरि मनाएकी थिइन् सुहागरात ? पहिले को गएका थिए सहबास गर्न ? « गोर्खाली खबर डटकम
द्रौपदीले पाँच पाण्डवसँग यसरि मनाएकी थिइन् सुहागरात ? पहिले को गएका थिए सहबास गर्न ?
महाभारतको कथा बारे सामान्यतया सवैलाई थाहा भएको विषय हो । जहाँ पाँच पाण्डव र सय कौरवबीचको लडाइको विषय पनि थाहा होला । महाभारतकै पात्र द्रौपदीले पञ्च पाण्डवसँग विवाह गरेको प्रसंग पनि थाहा छ ।द्रौपदीले पाँचवटा श्रीमानसँग विवाह गरेको कुरा त तपाईले महाभारतमा पढ्नु नै भएको होला । तर पाँच श्रीमान भएकी उनले कसरी सुहागरात मनाईन् भन्ने कुरा अझ रोचक रहेको छ । दुर्योधनले पाँचै भाइ पाण्डबहरुलाई मार्ने खवर फैलिएपछि, डराएका पाण्डबहरु आमा कुन्ति सहित ब्राम्हण जीवन ब्यतित गर्न थालेका थिए । यसरी पाण्डवहरु हरेक दिन भिक्षामा आएको सामा आमालाई सुम्पिएर मात्रै उपभोग गर्ने गर्दथे।
अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसंग आज्ञा लिएर धनुषमा बाण चढाए र तलाउतर्फ निहुरिएर चलाएको तीर माछाको आँखा बिचबाटै बाहिरियो। राजाको पूर्व सर्त अनुसार द्रौपदीले अर्जुनलाई स्वयंवर गरेकी थिइन्। द्रौपदीलाई लिएर खुशीले गदगद हुंदै माता कुन्तीको चरणमा सुम्पिन हतारिएर आईपुगेका पाण्डवहरु तर्फ हेर्दै नहेरी कुन्तीले सबै भाइले बाँडेर राख्नु भनेकी थिइन्।आमाको बचनलाई आदेश मान्ने पाण्डबहरुले बिरोध जनाएनन्। यस कुराबाट आहत बनेका राजा द्रुपदले व्यास ऋषीसंग सल्लाह लिए । पुर्वजन्ममै देवादी देव महादेवले द्रौपदीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर बरदान दिएका थिए। द्रौपदीले आफूलाई संसारकै सर्बज्ञानी पुरुष पति बनाउन पाउं भनेर पाँच पटकसम्म भनेकी थिइन् । पाचैँ पटकसम्म नै महादेवले तथास्तु भनेका थिए।
सवैभन्दा पहिले जेठा दाजू युधिष्ठिरले सुहागरात मनाए त्यसपछि भिमले त्यसैगरी प्रत्येक पाण्डवले कुमारी द्रौपदीसंग सहबास गर्न पाए। यी कुराहरु धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएका छन्। महादेवकै बर पाएका कारण दौपदी पञ्च कन्या मध्येकी एक हुन् । पाँचवटा पति भए पनि उनी कन्याका रुपमा कहलिन्छिन् । शास्त्रमा पञ्चकन्याका रुपमा अहिल्या द्रौपदी, कुन्ती, तारा र मन्दोदरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।